Mametraha boaty ambony, seho fisehoana, efijery tafo fiara - Yunting
Kalitao avo lenta amin'ny vidiny mirary.
Mpilalao DVD fiara, mpilalao DVD fiara manokana, GPS fiara, fanaraha-maso lohan'ny fiara miaraka / tsy misy mpilalao DVD.
Masinina fanodinana sary avo lenta namboarina hanatsarana ny kalitaon'ny sary.
Ireo mpandahateny stereo dia manome feo tsara kalitao amin'ny teatra.
13 taona mahery
Niorina tamin'ny taona 2008, ny orinasanay dia lasa orinasa orinasa manerantany mahomby miaraka amin'ny foibe any Guangzhou sy ny birao any Chengdu China ...
afaka mamaly amin'ny fomba mahomby ny filan'ny tsena iraisam-pirenena isika amin'ny alàlan'ny vidin'ny fifaninanana, kalitao, fahamendrehana, fandefasana ara-potoana ary ny fenitra ambony indrindra amin'ny serivisy.
Izahay dia natokana ho an'ny etika avo lenta amin'ny loharanom-pahefana, miaraka amin'ireo mpamatsy izay niara-niasa tamina taona maro, izay azo ianteherana amin'ny fahaizana avo lenta sy matanjaka amin'ny famokarana.
Mahazoa fiderana avo avy amin'ny mpanjifa.
Diniho tsara ny antsipirian'ny vokatra rehetra.
Kalitao avo alohan'ny sy aorian'ny fivarotana.
1. Tandremo ny fitazonana ireo zava-misy eo amin'ny tontolo iainana. Ny fampiasana ny tontolon'ny milina fanaovana dokam-barotra dia hisy fiantraikany mivantana amin'ny fampiasana ny vokatry ny milina fanaovana dokam-barotra sy ny fiainana, raha toa ka manjelanjelatra loatra ny jiro, na jiro mivantana mihitsy aza, amin'ny lafiny iray dia misy fiantraikany amin'ny fifandraisana an-tsary ny milina fanaovana dokambarotra, o ...
1, famafana ny hafanan'ny mpankafy, akorandriaka misy jiro maharitra lava mba hanamafisana ny famafana ny hafanana 2, ny fampiasana vombony alimina, izay fomba iray mahazatra amin'ny fanaparitahana ny hafanana, miaraka amin'ny vombony alimina ho ampahan'ny akorandriaka hampitombo ny faritra fanaparitahana ny hafanana. 3. Hydrodynamika an'habakabaka, mampiasa ny endrik'ilay akorandriaka jiro, pro ...
1, ny ampahany amin'ny lamba dia ny vokatra fitaratra, ny sisin'ny vera ary ny zorony dia somary maranitra, ny fametahana dia mila mandray fonon-tànana / fonon-tànana 2. Ny ampahan'ny efijery fifandraisana dia vera marefo. Aza mampisy fiantraikany mahery eo amin'ny efijery fifandraisana rehefa mametraka. 3, ny filan'ny efijery fifandraisana ...